Sida loogu daro Raadinta Ololaha Falanqaynta Google Hootsuite | Martech Zone
Sida Loogu daro Ku-raadinta Ololaha Google Analytics ee Hootsuite
Wednesday, May 9, 2012 Arbacada, Agoosto 22, 2018 Douglas Karr
Shalay taas waan ku dhawaaqnay DK New Media loo magacaabay a Hootsuite Xalka Partner. Dhamaanteen waan wada isticmaaleynay Hootsuite Pro xisaabtamo dhowr sano oo aad jeceshahay sifooyinka sii socda iyo dabacsanaanta ay siinaysay kooxdayada. Oo… waxay ku jirtaa qayb yar oo ka mid ah kharashka inta badan matoorada daabacaadda bulshada.
Waxaan ku riixnay dhammaan macaamiisheenna inay si buuxda uga faa'iideystaan ​​raadinta ololaha markay u dirayaan xiriiriyayaashooda Hootsuite. Dad badan ayaa u maleynaya inay u baahan yihiin inay gacanta ku qoraan cinwaanka 'URL' - laakiin Hootsuite dhab ahaantii waxay bixisaa interface aad u fiican oo lagu daro macluumaadka lagama maarmaanka ah ee raadraaca ololaha.
Ololaha 'querystring' wuxuu ka kooban yahay 5 halbeeg:
Isha Ololaha (utm_source) - halbeeg loo baahan yahay. Adeegso utm_source si aad u aqoonsato mashiin raadin, magac joornaal, ama ilo kale. Tusaale: utm_source = google
Dhexdhexaadinta Ololaha (utm_medium) - halbeeg loo baahan yahay. U adeegso utm_medium si aad u ogaato aaladda sida iimaylka ama kharash-ku-riix. Tusaale: utm_medium = cpc
Muddada Ololaha (utm_term) - halbeegga xulashada Loo adeegsaday raadinta lacag bixinta. U adeegso utm_term si aad u ogaato ereyada muhiimka ah ee xayeysiintan.
Tusaale: utm_term = orod + kabo
Mawduuca Ololaha (utm_content) - halbeegga xulashada Waxaa loo adeegsaday baaritaanka A / B iyo xayeysiisyada ku wajahan waxyaabaha la beegsanayo. Adeegso utm_content si aad u kala soocdo xayeysiiska ama xiriiriyeyaasha tilmaamaya isla URL-ka. Tusaalooyin: utm_content = logolink or utm_content = textlink
Magaca Ololaha (utm_campaign) - halbeegga xulashada Waxaa loo adeegsaday falanqaynta ereyga muhiimka ah. U adeegso utm_campaign si aad u ogaato kor u qaadista wax soo saarka gaarka ah ama olole istiraatiiji ah Tusaale: utm_campaign = guga_sale
Halkan waxaa ku dhow meesha aan u dejinnay URL-ka inay lahaato Raadinta ololaha Google Analytics. Haddii aad calaamadeyso sanduuqa ikhtiyaariga ah, waad haysan kartaa had iyo jeer ku dar raad raadin olole URL kasta. Taasi maahan fikrad xun… waxayna kugu kalifaysaa inaad raadiso bogagga dibedda ee aad u diraysid gaadiid badan oo gudbin ah.
Markaad gasho URL-kaaga aagga xiriirinta, waxaad arki doontaa qalab aad gujin karto si aad hoos ugu dhigto meelaha horumarsan si aad ugu darto raadraaca ololaha. Mid ka mid ah horudhaca horeba waa Google Analytics. Hadaad isticmaaleyso web kale Analytics madal, waxaad si sahal ah ugu dari kartaa waxyaalaha aad horay u sii diyaarisay halkan, sidoo kale!
Waxaan halkan ku wadaagi doonnaa talooyin iyo tabaha badan oo halkan ku saabsan sida si buuxda looga faa'iideysto Hootsuite Pro istaraatijiyadahaaga warbaahinta bulshada. Bixinta: Waxaan sidoo kale la wadaagi doonnaa xiriiriyeyaal xiriir la leh markaan dhajinno qodobadan.
Tags: raadinta falanqayntaraadinta ololahaAnalytics googlehootsuite
Douglas Karr Wednesday, May 9, 2012 Wednesday, August 22, 2018
Macluumaad Weyn Ayaa Keenaya Suuq Geyn Tirooyin Waaweyn
Dulucda, Aragtida iyo Doqon Wadaagga
Veracity Technologies LLC
May 24, 2012 at 7: 34 AM
Waad ku mahadsan tahay maqaalkan weyn! Runtii waan ku raaxaystaa barashada talooyinkan!